Ku noqoshada adeegsiga KDE ee Imtixaanka Debian | Laga soo bilaabo Linux
Inta badan akhristayaasha halkan jooga way ogyihiin inaan ahay isticmaale Xfce. Waan jeclahay tan Deegaanka Desktop sababo badan awgood oo aan hadda khusayn, laakiin marwalba waan idhi taas KDE waa deegaanka ugu fiican ee loo yaqaan 'Desktop Environment of' GNU / Linux, ama ugu yaraan aniga ahaan, ugu dhammaystiran. Dhibaatada kaliya ee aan waligay ku qabay waa isticmaalka badan ee ilaha ay ka kooban tahay.
Waa hagaag, marka laga reebo HP Netbook (oo leh Xfce), shaqada maanta waxay ii qoondeeyeen kumbuyuutar nooc kale ah Dell modelo Sax T1600. Kaliya waxaan ku sharixi karaa farshaxankan: Bahal. Ayaa 4GB oo RAM ah iyo Processor Intel Xeon taasi waxay ii calaamadeysaa 8 xuddun, waxaas oo dhan si aan u maareeyo 2 darawal adag oo SCSI ah, ka dibna waxaan moodayay, Maxaan ku rakibaa xayawaankan?
Dabcan xulashada koowaad waxay ahayd Debian, oo in yar ayaan shaki ka dhex-galay Xfce y Gnome, laakiin markaan arkay isbeddelada ku imanaya Desktop-ka Mexico, waxaan doortay inaan rakibo jiirka. Laakiin ka hor intaan runta sameyn, waxaan bilaabay inaan fikiro oo waxaan isweydiiyey: Qeybtaan kumbiyuutarka ah, waa maxay ilaha aad u baahan tahay inaad keydiso? Tag boorso qaado oo rakibo KDE.
Oo sidaasaan yeelay, sida aad ku arki karto sawirka bilaabaya qoraalkan. Weli waxaan hayaa waxyaabo badan oo aan u habeyn karo, laakiin bilowgii hore waxaan jeclahay mawduuca aan dhigay Firefox:
Kaliya waxaan dhihi karaa hal shay: taasi waa sida fiican KDE. Iyada oo dhowr codsi la furay oo aan waxna la tayaynin, isticmaalka ayaa ku wareegsan 500MB. Marka waxaan u maleynayaa in illaa iyo intaan haysto kombiyuutar sidan oo kale ah, KDE had iyo jeer ka mid noqon doonaa xulashooyinka ugu horeeya sida Desktop ku xiga Xfce y Qoraxda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Ku noqoshada adeegsiga KDE ee Imtixaanka Debian
xD wanaagsan waxaan isku dayay inaan ka soo rakibo tijaabada debian-ka DVD si aan ugu rakibo deegaanka aan jeclahay kde xD laakiin waan kari waayay, maadaama aysan aqoonsanin guddiga internetka ee ku qoran buugga mana aysan ii oggolaan inaan raaco tallaabooyinka rakibaadda: S
Waxaan kuugu hambalyeynayaa doorashada iyo darbiyada, waxay ahayd mid aad u qurux badan.
Ku soo dhawow naadiga… 🙂
Ilaa dhowaan waan haystay, Tijaabada Debian ee KDE, markii dib loo dhigay waxay ahayd 4.7.4. Horey waan uga tagey KDE waxaanan kulaabtey jaceylkeygii caadiga ahaa, Gnome, waxaan kusoo noqdey ikhtiyaarkii ugu fiicnaa ee aan yeesho, SolusOS
In kasta oo aan wali ku haysto tijaabada Debian Gnome Shell 3.4.2 imtixaanka HD….
Ku raaxayso KDE 😉
Sikastaba, waa KDE midna Xfce midkale .. Waan arki doonaa marka SolusOS xasilloon yimaado waxa dhacaya 😀
Muddo kahor 4.8.4 waxay gashay imtixaan 😉
hello elav soo qaado iso oo ah tijaabinta kde laakiin ciribtirka ma aqoonsana guusha wuxuuna ku bilaabanayaa konsole waxaan ula jeedaa lambarro
Waxaan qoraa login laakiin iima oggolaaneyso inaan galo erayga sirta ah ma aqaano waxaan sameeyo
Malaha waa dhibaato ka jirta ISO. Kuuma sheegi karo waqtigan, maadaama wixii aan sameeyay ay ahayd kaliya rakibidda nidaamka aasaasiga ah markii dambena aan rakibayay xirmooyinka aan u baahnaa. Cusbooneysiinta kadib, GRUB ayaa ii aqoonsaday kaliya gelitaanka Windows. Xaaladdaada, waxay u badan tahay in Degaanka Desktop-ka aan la rakibin. Adoo isticmaalaya isla isla Debian disk, raac casharkaan si loo eego haddii aad xalliso dhibaatada.
oday waxaan ka imid shaqada, waxaan arki doonaa casharkaaga, wax la mid ah waxaan u baahday mahadsanid elav
nin yahow su'aal baan kuu hayaa (horeyba waan u soo degsanayaa iso), talaabooyinkani waxay ii ogolaanayaan inaan ku rakibo debian daaqadaha? inta soo hartay, mahadsanid, macallinka ayaa wanaagsan oo waxaan ahay doqon aan horay u arag kahor hehe
Waxaan kugula talinayaa inaad dhibaatadaada ku soo bandhigtid golaha bogga, had iyo jeer way igu caawiyeen halkaas waxayna u badan tahay inay adiga kaa jawaabaan. http://foro.desdelinux.net/
Waxaan haystaa Debian oo aan ku rakibey WIndows 7 Professional oo ka yimid warshaddii kombuyuutarka dhib la'aan 😀
Rakibiyaha Debian beryahan dambe dhibaato ayaa ka haysata aqoonsiga Nidaamyada kale ee Hawlgalka.
Markaad bilowdo Debian ka dib markii aad rakibtay, orod "update-grub2" si ay u aqoonsato OS-ka kale ee aad rakibtay
hadday taasi tahay ... KDE waa bahalka miisaska kumbuyuutarrada, dabcan haddii aad haysato mishiin nus ah xaaladaha noocaas ah, hadda uma maleynayo inaad jeceshahay Xfce, hahahaha
bahal? ... HAHA taas ayaa iga dhigeysa inaan ka fikiro: «KDE waa quruxda, Gnome-na waa bahalka» ... HAHAHA
Waxaan ula jeedaa inay tahay tan ugu miisaska badan, waad la qabsan kartaa dhadhanka oo dhan, hahahahaha
Haa, sidaad u leedahay kde waa midka ugu dhameystiran iyo sidoo kale codsiyada. Uma baahnid pc noocan oo kale ah si aad udhaqaajiso kde sidoo kale, ha ka nixin dadka.
Waxaa laygu dayey inaan tijaabiyo gnome sababo laxiriira qaabka ay ushaqeyso iyo qaab cusub oo ushaqeyso, laakiin waa in kde waxbadan i siiso weyna adagtahay in laga tago, sifiican iyo wixii aan aqriyey mooyee, gnome wuxuu ubaahanyahay waxbadan
Laakiin haa, kan ugu fiican uguna awooda badan waa kde. Ku raaxayso
KDE waa tan ugu dhameystiran shaki la'aan, waxa kaliya ee cuna kheyraad badan oo kiiskeyga waxaan jeclahay desktop-ka fudud, maadaama aanan u baahneyn fursado badan.
Anigu waxaan ahay taageere xfce, qurxiyo yar ayaa noqon kara mid aad u wanaagsan waana mid wax ku ool ah oo dabcan, sidoo kale waxaan jeclahay SolusOS oo leh gnome 2.
Waraaqda gidaarka ah ee aad dooratay midkeedii ugu dambeeyay!.
Marka ugu horeysa, hambalyo barta, ma jiraan dad badan oo bilaash ah spam iyo trolls (kuwa dhibsada) iyo waxyaabo wanaagsan.
Muddo dheer ayaan ka soo booqanayay linux oo waligey kuma fikirin inaan aqrin doono qoraalkan waxaan ku sigtay inaan kufto kursigeyga markii aan aqrinayay, waxaan rajaynayaa inaad sii wadayso isticmaalkiisa oo aad iska dayso xfce oo ah mid fool xun oo madhan sida kaliya hal (beenta ayaa ah desktop-kayga labaad ee aan jeclahay, haa waxbaa qaldama ama waan ku daalayaa kde waxaan u dhaqaaqaa distoor isticmaala xfce)
Waa inaadan tilmaamin kde ahaan liqitaan kheyraad, mana cuno wan aad u badan ama micro wixii ay bixiso, mana ahan inaad sameyso waxyaabo badan si aad uga dhigto cunitaan yar, xaqiiqdii, inta badan talooyinka la siiyay si aysan u cunin wax faa iido ah ma leh wax badan (waxa kaliya ee ay sameeyaan ayaa ah inay abuuraan dheecaan dheeri ah iyaga oo tirtiraya saamaynta aniga aragtidaydu leedahay kde ka badan) taas oo haddii ay shaqeyso ay tahay in la joojiyo nepomuk iyo akonadi haddii aadan adeegsan miiska macnaha
PS: kde waxay isticmaashaa 320 megabytes oo hada bilawday iyo ilaa 400 kadib markay isticmaaleysay buuga xusuusinta, muusikada, filimada, sanduuqa, iskuday inaad barnaamij ka sameyso webka oo mararka qaarna aad isticmaasho libreoffice oo waxaan qeexay swappiness = 1 (sida iska cad codadka oo dhan waan xirayaa marka hore) ; waxan oo dhan oo aan lahayn nepomuk iyo akonadi
PD2: Waxaan u isticmaalaa kde buugga asus x52f.
PD3: Ma aqaano inay jiraan markii aan isticmaali jiray ama aan isticmaali jiray daaqadaha isticmaalka wanku wuxuu ahaa mid go'an kiiskeyga W7 x86 wuxuu cunay 650 - 800 megabytes sidaa darteed liqso kheyraadka OS kale sheekadaas = P.
Si wanaagsan ayaa loo qabtay KDE kaliya maahan tan ugu dhameystiran ee DE, sidoo kale waa tan ugu wax soo saar badan, ilaa iyo inta aad ugu habeynaysid baahidaada.
Tilmaam: si aad Firefox uga dhigto mid wanaagsan, u gudub: Xulashada Nidaamka> Muuqaalka goobta shaqada> Qurxinta daaqada> Isku hagaaji qurxinta ...
Mahadsanid, way i caawisay! Arigatou gozaimasu!
Waad ku mahadsantahay Talada 😀
Gunaanad: waxaan u adeegsanaa Xfce masaakiinta iyo kuwa hodanka ah ee KDE, hehehehe
ma jiraan wax la mid ah makin awood leh oo aad ugu raaxaysato OS-ga aad ugu jeceshahay, hambalyo!
Horay waad u ogtahay oraahda ah, "Ilaah wuxuu gadh siiyaa kuwa aan garka lahayn" ... midkaan wata PC-gaas, xitaa ma jecla KDE sida aan u jeclahay ... HAHAHAHAHAHA !!!!
Elav, waan arkaa, inaad xfce u isticmaashay daruuriyad la'aan xukun la'aan, waxaad u egtahay haween, waxay la socdaan ninka ugu lacagta badan.
Taabadalkeed, isagu waa ninka caadiga ah, wuxuu raacaa kan ugu quruxda badan. 😛
Ku jawaab vickypi
Maya, taasi run maahan. Waxaan isticmaalay maya, waan isticmaalaa Xfce maxaa yeelay sidaan ku iri galitaanka maqaalka «WAAN JECLAHAY». Si kastaba ha noqotee, waxaan bilaabay isticmaalka GNU / Linux con KDE 3.X, waxay ahayd miiskeygii ugu horeeyey mar walbana waan jeclaa.
Waxaan hayaa kumbuyuutaro leh qeexitaano aad u wanaagsan waxaanan ku hayaa XFCE dhammaantood ... Kawaran hadaan jeclaan lahaa inaan kaaga sheekeeyo desktops-yada "culus", KDE waligay igama dhicin aniga waxqabadka marka la barbardhigo Unity tusaale ahaan ... waxay umuuqatay wax badan sida Windows-ka oo kale oo aan waafajiyay waxay iga dhigtay inaan xumaado nuxurkeeda ... 😛
Farsamaynta 'IS' waa nuxurka ay leedahay .. 🙂
Waxaan u maleynayaa inay ka saxnaan laheyd in la yiraahdo Windows-ku wuxuu u egyahay KDE.
KDE 4.0 (Janaayo 2008)
Windows Vista (Abriil 2009)
Waan ku raacsanahay jai, labadaba tan iyo deegaan kasta oo desktop (xitaa daaqadaha sida ugu fiican ee uu awoodo), tuneralo 'waa' nuxurkiisa.
Jawaab Santiago Caamaño Hermida
Windows Bosta ... waan ka xumahay, Windows Vista, waxay ka timid 2007. Midka 2009 waa Windows Semen, waxaan ula jeedaa, Windows Seven. Oo hadda Windows Chocho ayaa soo baxaya, waxaan ula jeedaa, Windows Siddeed.
Marwalba waxaan arkaa kombuyuutarro badan oo KDE ah oo si heer sare ah loo habeeyay oo muuqaal fiican leh. Runtu waxay tahay in aan waxba laga qabanayn sida ay ku yimaadaan "istaandarka" ... tusaale ahaan waxaan tijaabiyey live chad chakra mana aanan ka helin haba yaraatee.
Qof kasta oo garanaya wuxuu sameyn karaa boosteejo habboon oo KDE ah, sax? 🙂
Waan taageersanahay fikirka. Waxaan marwalba rabay inaan tijaabiyo KDE laakiin waxa ay kor ku sheegaan waa run, waxay u egtahay wax yar Windows-ka aniga ayaa i dhibaya. Qoraal ku saabsan sida wax looga beddelo KDE si loo gaaro muuqaal wanaagsan ayaa aad u wanaagsan.
Cunsurka Cunsurka (Wolf) dijo
Fursadaha habeynta ayaa ku dhowaad aan dhammaad lahayn. KDE waa loo habeyn karaa si ay ugu ekaato Gnome 2, Gnome Shell, Unity, Mac, Windows ama waxkasta oo aad ka fikiri karto. Iyada oo la adeegsanayo mawduucyada plasma ee saxda ah, QtCurve ama Bespin u fiican, iyo astaamo qabow, iskudhafka ayaa wax badan iska beddelaya.
Ka jawaab Element Zero (Wolf)
Wanaagsan, waxaan u maleynayaa inaad ka faalloonayso badanaa sababta oo ah guddiga ayaa ku jira hoose, badhanka badhanka bilowga, shaqooyinka, iwm. Ma aqaano haddii cirro ka mid ah daaqadaha by default sidoo kale idin xusuusinayaa.
Websaydhka waxaad ku haysataa tusaalooyin badan oo ah sida loo beddelo KDE si ay ugu habboonaato waxaad rabto. Waxaan u maleynayaa in markaad jilicsan tahay ama aad fiiriso, waxay ku siin doontaa adiga fikrad ah waxa aad ka beddeli karto KDE ... dhowr ayaan ku siinayaa ... haddii aad su'aalo qabtidna waan kaa caawin karaa ..
Muuqaalka Gnome2 -> http://drykanz.wordpress.com/2011/02/17/transformar-kde-en-gnome/
Muuqaalka Gnome2 ->http://www.muylinux.com/2011/08/27/de-kde-4-a-gnome-2-en-3-minutos/
Muuqaalka MacOsx--> http://drykanz.wordpress.com/2010/06/07/transformar-kde-en-mac-os-x/
Muuqaalka Gnome3 -> http://www.taringa.net/posts/linux/10474121/Transformar-KDE4-en-GNOME3.html
Muuqaalka midnimada -> http://www.muylinux.com/2011/09/17/de-kde-4-a-unity-o-algo-parecido/
Sidaad u aragto, haddii Windows ahaan ay kuugu muuqato wax badan ... ma jiraan wax KDE ah oo aan la taaban karin oo 2 ama 3 daqiiqo gudahood waad ku heleysaa sidaad rabto. Marka markaan maqlo qof ka cabanaya KDE muuqaalka, sifiican uma fahmin ... Waxaad ka caban kartaa nepomuk, inuu kugu cuno mashiinkaaga, inay leedahay fursado badan ... laakiin muuqaalka? Mudanayaal, waxaan ku jirnaa Linux, waa dambi in aanaan ku khaldamin xulashooyinka oo aan wax uga tagno sida aan jecel nahay. 😉
Waad ku mahadsantahay iskuxiraha, hada isha ayaan ku hayaa 😀
Qaarkood ayaa laga yaabaa inay muujiyaan xoogaa adeegsi ah oo waxtar u leh KDE waqtigaan (tusaale ahaan, Daisy dock lama shaqeynayo KDE 4.8 (waxaad ubaahan laheyd hawl quruxsan ama howlo xarrago leh), iwm ... laakiin fikradda ayaa jirta, taas oo Waxyaabaha waa la beddeli karaa Tan iyo markii aan ogaaday Bespin, waxaad samayn kartaa waxyaabo la yaab leh, maalin dhaweyd waxaan aqriyay qof ka cawday dhalaalka daaqadaha, maxaa yeelay waxaa ka walwalsan astaamaha dhacaya, iwm ... markay waxaas oo dhan noqon karaan si fudud loo qaabeeyey (si fiican, mararka qaarkood xoogaa qodis ah) xulashooyinka muuqaalka KDE.
Waxa kaliya ee aanan ka helin KDE waa inaysan sahleynin isbadal dhameystiran, taasi waa IConos + KDM + Nidaamka Midabka + Qurxinta Daaqada + Mowduuca Plasma, waana inaad midba mid u badalaysaa, waxkastoo iska taga , waxaad haysaa pastiche qariib ah ... Malcer wuxuu sameeyay barnaamij yar oo loogu talagalay in lagu dhigo mawduuca Caledonia si wax walba hal mar loo wada beddelo .. Taasi waa inay noqotaa habka loo qaabeeyo KDE mustaqbalka .. laakiin haye, waqti ilaa waqti!
Waxa kaliya ee aanan ka helin KDE ayaa ah inaysan sahleynin isbadal dhameystiran, taasi waa IConos + KDM + Qorshaha Midabka + Qurxinta Daaqada + Mowduuca Plasma, waana inaad u badashaa mid mid, waxkastoo mid ka tag, waxaad leedahay cajaa'ib yaab leh ...
Dhacdo ahaan, waxaan isla wax ka faalloonayey saaxiibkey Sandy. In kasta oo hal dhinac tani ay noqon karto mid waxtar leh, dhinaca kalena waxay ka dhigaysaa habeyn waxoogaa ka sii dhib badan.
KDE xoogaa waa ka dhib badan tahay, maxaa yeelay waxay leedahay fursado badan oo ka badan dhammaan deegaannada kale ... taasi waa, waxay kuu oggolaaneysaa inaad sameyso A LOT more.
Iyo Gnome2 oo u eg Mac ... Midnimo u eg Darwinkii hore ee Apple ... iwm iwm 🙂
Dhamaadka, dhammaantood waxay u egyihiin wax HAHA.
Hagaag… 😀… Shaqsiyan waxaan soo dhigay qoraalo badan oo kusaabsan badalida waxyaabo badan oo KDE ah 😉
Fiiri oo kama qoomameyn doontid.
caado ... cod fiican.
Boorsada tag oo rakib KDE. Caadiga ah xD
Miyuu ka sii dheeraan doonaa intii aad xubuntu isticmaashay?
Wax fikrad ah malahan 😀
Waxaan sharad ku galay inaysan ka dhigin bisha KDE
Kaliya waxaan tijaabinayaa wakiilka isticmaalaha, iska dheji faallada xD
Sababta oo ah processor-ka aad sheegayso, waa server, sax?
Waad dhihi kartaa haa 😀 laakiin si la yaab leh waa uun xarun.
Xagee bay ku iibiyaan xarumahaas? Waxaan rabaa taas, hahaha, halkan qalabkaas waxaa loogu isticmaalaa server-yada HP
desktop-ka ayaa umuuqda mid aad ufiican. xagee ka heshay gidaarka gidaarada?
Hagaag, KDE horay ayey u keentay 😀
dhab ah ???? Hagaag, xaqiiqdii Debian, maxaa yeelay Chakra ma joogo.
Waxaan u maleynayaa inaad ku rakibtay kde-wallpapers ama kdeartwork-wallpapers.
fiiro gaar ah u yeelo. mahadsanid!
mahadsanid elav, waxaan raacayaa talooyinka oo waxaan kuxiranahay kde oo lagu daray kumbuyuutarkuna waa mid aad u dhakhso badan, waxaan ubaahanahay inaan xaliyo qashinka aan aqoonsaneyn daaqadaha, si aan uga arko goobta ay taaban doonto
Papo, goormaad beedka dhigtaa? KDE, XFCE, maxaad u isticmaali doontaa sanadka 2013? Samee almanac maalmaha aad bedesho jawiga desktop-ka, waxaan u maleynayaa inaad u baahan doonto dhowr bilood oo dheeri ah ... Hahahahaha, cajaladdu waa wanaagsan tahay! xD
Hahaha laakiin haddii aan la joogay in ka badan sannad Xfce.. Waxaan qabaa think hahaha
hello subax wanaagsan amarrada. os-prober iyo cusbooneysiin-grub xalalka daaqadaha wax, waan ku faraxsanahay debian
Hal su’aal, maxaa loo yaqaan sanduuqaas? Waan raadinayay mana heli karo, runtii waan ka helay.
Qorrax dhaca vector, waan helay
Waxaan u sheegaa inaan jecelahay kde, waxay ahayd desktop-kayga koowaad laakiin suse iyo dhibaatooyinkeeda at iyo kubuntu iyo caajisnimadeedu way i fogeysay waqtigaas, hada waxaan ku soo laabanayaa fedora iyo debian waxaanan u maleynayaa inaan sii joogo waqti dheer maxaa yeelay gnome-ka qolof waxay u egtahay waxyaalahaas fardaha indhaha ayey gelinayaan si aysan dhinacyada ugu arkin! Waa wax laga xumaado maxaa yeelay gnome 2 ayaa adiga kugu habboon, adigana uma lihid sida gnome 3. Ragg, sidoo kale waxaa i dhiirrigaliyay boggan, waad ku mahadsan tahay
Sideen uga dhigi karaa Firefox inuu u ekaado sida sawirka?
Salaan iyo blog aad u wanaagsan!
Waa inaad ku rakibtaa mawduuc Firefox (laga bilaabo Plugins ama adoo adeegsanaya goobta Plugins) loo yaqaan Ogsijiin KDE.
Oh !! Aad baad ugu mahadsantahay jawaabtaada.
Waan ku raacsanahay, wallpaper waa cajiib!
Hal su'aal, marwalba waan tixgeliyey in KDE ay ahayd inuu lahaado desktop-ka xamuul ah. Maxay yihiin faa'iidooyinka marka ay aad u yartahay?
Ha igu qaldan, runtii waxaan jeclahay minimalism!
Waan ku faraxsanahay adiga iyo kumbuyuutarkaaga, go'aan aad u wanaagsan, waxaan haystaa vaio core i3, iyo Linux Mint 13 Maya oo aan ka imid, waxayna ku duushaa Mate maadaama ay qayb ka tahay 3da deegaan ee aan ugu jeclahay>
iyo mararka qaarkood Xfce.
Awesome¡¡¡ Oo @NinjaUrbano wuxuu dhigayaa kooxda saddexaad, ma xuma, dhamaadka uguma xumaan doono, adigu waxaad ahayd deluxe elav¡¡ laakiin waxaan wax ka qoraa pentium 4 si aanan u gaarin xDD Mashiinnada Salaanta ¡¡¡
Ku jawaab luweeds
Wow, nasiib wanaag Elav! Waxaan jeclaan lahaa inaan haysto mashiin noocaas ah. Dhanka kale, ha noolaado jiirka yar ^^
Nasiib ayaan lahaa haddii makiinaddu tahay hantidayda hahahaha
Qosol badan, waxaan ku isticmaali karaa oo keliya debian-ka 'Virtualbox', laptop-kayga kumuu rakibo, yaab
Waxaan rabaa inaan bilaabo isticmaalka Linux laakiin sidee iyo halkee ku bilaabayaa muuqaalkan aadka u wanaagsan ee caawinaya !!!
Latex, la qorista fasalka (qaybta 3)